Veenzuweelaan gidduma rakkoo diinagdee keessa jirtutti maallaqa haarawa labsite - BBC News Afaan Oromoo
Veenzuweelaan gidduma rakkoo diinagdee keessa jirtutti maallaqa haarawa labsite
Goodayyaa suuraa Prezidaanti Maaduuroon sagantaa torbanii TV fi Reediyoorratti maallaqa haaraa labsan
Pirezidaantiin Veenzuweelaa Nikolaas Maaduuroon rakkoo diinagdee dandamachuuf kan isaan dandeessisu maalaaqa iccitii qabeessa ta'e kan namni koodii isaa hin beeknefi hubachuu hin dandeenye haarawa labsan.
Maallaqni maqaan isaa ''Peetroo'' jedhamu kun qabeenya boba'aa, gaazii, warqii fi daayaamandiitiin deeggarama.
Paartilee mormitootaa keessaa miseenosota paarlaamaa kan ta'an garuu korooricha mormaniiru. Baayyeensaanii marii Kongireesii barbaada jedhu, kuun ammoo tasumaa hojiirra oolmaasaa ni shakkina jedhu.
''Maaduroodha kan gowwoomaa jiru malee kun fudhatama hin qabuum'' jedhe miseensi Paarlaamaa garee mormituu fi rogeessi diinagdee Aanjel Alvaraadoo wayita Ejensii Oduu Rooyitarsi waliin haasawa taasisetti.
Galiin boba'aa hir'achuu fi gatiin maallaqa biyyattii gadi bu'uun diinagdee Veenzuweelaa miidheera.
Pirezidaanti Maaduuroonis Ameerikaan guddina keenyatti karaa cufuuf qoqqobbii keesse jechuun komatan.
Pirezidaanti Maaduuroon Televiijinii biyyattiirratti wayita haasawan maallaqni haaraan bifa iccitii qabuun qophaa'e kun Veenzuweelaaf ''birmadummaa maallaqaa ishee kan eegu, daddabarsa maallaqaa kan mijeessuu fi uggura maallaqaa qolachuuf kan fayyaduudha'' jedhan.
Garuu akkaataa hojiirra oolmaa fi yoomirraa akka eegalu wanti jedhan hin jiru.
Goodayyaa suuraa Boba'aan utubaa diinagdee Veenzuweelaati
Veenzuweelaan liqii doolaara Ameerikaa biiliyoona 140 ofirraa qabdu kaffaluu fi fuulduraafis liqii mijeeffachuuf maallaqa iccitii qabu 'Peetroo' akka fayyadamtu ibsan Mr. Maaduuroon.
seenaan diinagdee Veenzuweelaa qabeenya boba'aa irratti kan hundaa'eedha, gatiin boba'aa hir'achuun garuu rakkoo diinagdee fi siyaasaatiif ishee saaxileera.
Ameerkaa fi Gamtaan Awurooppaa mootummaa garboomfataa adabuuf qoqqobbii irra kaa'aa turan.
Ji'a darbe Raashiyaan liqii doolaara Ameerkaa Biiliyoona 3 fi miiliyoona 150 Veenzuweelaaf mijeessitee turte.